जनवरी 29, 2020 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments आयुर्वेद, आयुर्वेदको भविष्य
एलोपैथिकलाई पछार्दै आयुर्वेद अघि बढ्दैछ भन्दा कति आनन्द आउछ । कुनैबेला अव विश्व बजारमा आयुर्वेदिकको महत्व एलोपैथिक भन्दा हजारौं गुणा अघि बढ्ने संकेत भेटाइएको छ ।
भर्खरको प्राप्त समाचारमा आयुर्वेदिक एण्टिवायोटिकको प्रयोगबाट बैक्टीरिया-भाईरससंग लड्ने क्षमता आयुर्वेदिक एण्टिवायोटिकमा भेटिएको छ । हिजोसम्म कतिपयको विचारमा आयुर्वेदिकले ढिलो काम गर्छ भन्ने मानसिकतामा थिए भने अबको समय एलोपैथिक भन्दा आयुर्वेद कम छैन भन्ने कुरा प्रकाशमा आएको छ ।
आयुर्वेदमा पनि एण्टिबायोटिक औषधि विकसित भएको कुरा याहाँ राख्न पाउदा हामीलाई गर्ब महसुस भएको छ । एलोपैथिकका एण्टिबायोटिकको अत्यधिक प्रयोगले गर्दा रेजिस्टेड भएको अवस्थामा एउटामात्र विकल्प आयुर्वेद एण्टिबायोटिक भएको देखिन्छ ।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स ) भोपालले गरेको एक अध्ययनमा आयुर्वेदिक ऐंटीबायॉटिक औषधि फिफाट्रोल एउटा प्रमुख बैक्टीरिया संक्रमणमा सफल भएको बताइएको छ । फिफाट्रोल नामको आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगले बैक्टिरियासंग लड्न सक्ने भेटिएको छ भनेको छ ।
शोधकर्ता टिमका प्रमुख एम्स भोपालका निर्देशक डा. समरन सिंहको भनाइ अनुसार आयुर्वेदमा प्रतीरोधक क्षमता बढाउने खुबी रहेको देखियो । फिफाट्रोल नामक आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगबाट बैक्टिरियासंग लड्ने क्षमता भेटिएको छ ।
एम्स भोपालले आफ्नो शोधमा फिफाट्रोलले स्टेफिलोकोकस प्रजातिको बेक्टिया धेरै नै शक्तिशाली हुन्छ यस्ता प्रजातीका थुप्रै बैक्टीरिया जसमा अनेकौं आरियस, एपिडर्मिस, स्पोफिटिकस नामका बैक्टीरिया देखिन्छन् ।
यस्ता तिनै प्रकारको बेक्टिरियामा आयुर्वेदिक एण्टिबायोटिक फिफाट्रोल को प्रयोगले बेक्टिरियामा सफल उपचार रहेको प्रमाणित भएको छ । सिफाट्रोलको प्रयोगबाट निमोनिया, एरोजेन आदि बैक्टीरियामा समेत ठिक भएको देखिएको छ ।
फिफाट्रोल नामक औषधिको फार्मुला १३ प्रकारको जडिबुटी मिलाएर बनाएको देखिन्छ । तर १३ प्रकारको एउटा एन्टी माइक्रोबियल सलूशनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण जडिबुटी ५ प्रकारको छ । एमिल फार्मास्यूटिकल्स द्वारा तयार गरेको फिफाट्रोलमा सुदर्शन वटी, संजीवनी वटी, गोदांती भस्म, त्रिभुवन कीर्ति रस र मृत्युंजय रस मिसाएको देखिएको छ ।
बाँकी आठ जडिबुटीमा तुलसी, कुटकी, चिराइतो, मोथा, गिलोय, दारुहल्दी, करंज र अपमार्ग रहेको छ । यस्ता जडिबुटी हाम्रो देशमा प्रशस्त रहेको छ । हामीले आयुर्वेदलाई थोरै ध्यान दिन सके एलोपैथिक औषधि खानुपर्ने झण्झटबाट मुक्ति मिल्ने संकेत उपरोक्त अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।
बाथ रोग र यसको उपचार
छाती किन दुख्छ ? यस्तो छ यसको घरेलु उपचार
← भिटामिन के (Vitamin K) को कमीले हुन सक्छ रक्तस्राव
आज श्रीपञ्चमी विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पुजा →
नीम (Azadirachta Indica) र यसको प्रयोग
फ्रेवुअरी 25, 2019 अप्रील 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक 9
सेप्टेम्बर 4, 2019 सेप्टेम्बर 4, 2019 साइन्स इन्फोटेक 7
आयुर्वेदका जन्मदाता धनवन्तरी
नोभेम्बर 6, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1
के हो प्रेम ?
असुरो प्रयोगबाट हुने फाइदाहरु